घ्यूमा ५ चीज मिलाएर खानुस् निको हुन्छ यस्ता समस्या - सबैको समाचार
काठमाडौं,असार ३ ;नेपाली भान्सामा घ्यूको प्रयोग धेरै खानेकुरामा हुने गर्छ । दाल, सागसब्जी, रोटी आदिमा घ्यू हाल्ने गरिन्छ । घ्यूले खानाको स्वाद मात्रै होइन, यसले स्वास्थ्यका लागि पनि धेरै फाइदा पुर्याउँछ । स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार घ्यूसँग अन्य औषधिय गुण भएका चीजहरु मिसाएर खाँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु कम हुन्छ ।
काँक्रोका १५ रोचक तथ्य र स्वास्थ्यमा फाइदा
मिर्गौलाका बिरामीले दसैंमा कस्तो खानपान गर्ने? यी १६ कुरामा ख्याल राखौं
उच्च रक्तचापका बिरामीलाई स्वास्थ रहन १० टिप्स
नमोबुद्धमा २२८४ जनाको आँखा परीक्षण
बाबुको मुख हेर्ने दिन ‘सेवाघर’मा नमोबुद्धका नगर प्रमुख
कुन उमेरमा कति घण्टा सुत्दाँ स्वास्थ्य रहन सकिन्छ ?
बादललाई हराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी